Shirkadda Bancroft oo beenisay inay ka qayb qaadatay Howlgalkii Shacabka lagu xasuuqay ee Bariire. – Hornafrik Media Network
Shirkadda Bancroft oo beenisay inay ka qayb qaadatay Howlgalkii Shacabka lagu xasuuqay ee Bariire.
Bancroft oo ah Shirkad Amni oo ka hawl gasha Somalia ayaa beenisay inay qayb ka ahayd Howlgalkii ka dhacay Bariire-Shabeelaha Hoose oo lagu xasuuqay Dad Shacab ah. Waxayna Shirkaddu sheegtay inay wararka la xiriira ku lug lahaanshahooda hawlgalkaasi oo yahay Been Abuur.
Warsaxaafadeed ay soo saareen Bancroft waxay ku sheegeen inay caawiyaan AMISOM iyo Ciidamadda Danab ee Kumaandoosta Milatariga Somalia, “Bancroft waxay la shaqaysaa AMISOM iyo Ciidanka Danab oo ay ka caawiso Hawlgaladda, mana jiro AMISOM iyo Ciidamo Danab ah oo qayb ka ahaa Hawlgalkaasi,” ayaa lagu yiri Warsaxaafadeedka.
Bancroft waxay sheegtay inay Ciidamadda Somalia ka caawiso sidii ay uga adkaan lahaayeen ALshabaab. Waxayna sheegtay in Mudadii ay shaqaynaysay Somalia ay ku waysay Shaqaale.
Howlgalkan ayaa markii hore waxaa soo baxayay warar sheegaya in Bancroft ay qayb ka ahayd, balse Maraykanka ayaa cadeeyay in Hawlgalkaasi ay fuliyeen Ciidamo Soomaali ah oo gacan ka helayay Ciidamadda Maraykanka.
Warbixin: Casharrada Laga Bartay Rayidkii Lagu Dilay Bariire August 26, 2017
Madaxtooyadda Somalia oo laga eryay Agaasime Waaxeed Shalay ka hadlay Masjidka Madaxtooyadda.